Isra'iil oo dib u billawday duqeynta Qaza - BBC Somali
Isra'iil oo dib u billawday duqeynta Qaza
15 Luulyo 2014
Image caption Duqeymaha Isra'iil ee Qaza waxaa ku dhintay ku dhawaad 200 oo ruux.
Isra'iil ayaa dib u billawday duqeymana Qaza, saacado kaddib markii ay oggolaatay hindisaha xabadjoojinta ee Qaza.
Ururka Xamaas ee maammulo Qaza ayaa sheegay in uusan aqoonsanayn hindisaha xabadjoojinta, waxaa uuna sii waday gantaallaha uu ku ridayo Isra'iil xitaa kaddib markii ay Isra'iil ku dhawaaqday xabadjoojinta.
Dowladda Isra'iil ayaa horey u oggolaatay heshiis xabbadjoojin oo ay soo bandhigtay Masar, balse garabka milateri ee Xamas ayaa ku gacanseyray arrintaas.
Kulan ay yeesheen golaha wasiirrada Isra'iil ee ammaanka ayay ku sheegeen inay oggolaadeen heshiiska xabadjoojinta, balse waxay ka digeen inay sii wadi doonaan weerarrada haddii gantaallo laga soo rido dhanka Qaza.
Xamaas ayaa sheegtay in aanay aqbali doonin xabadjoojin inta Isra'iil ay ka sii daynayso maxaabiista reer Falastiin, oo xayiraaddana laga qaadayo marinka Qaza.
Qorshahan waxaa ka mid ah in lasoo afjaro isbuuc qalalaaso ah iyo dagaalka, iyadoo xabad joojinta la doonayo inay dhaqan gasho saaka oo Talaada ah.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Samex Shukri ayaa ku sheegay codsiga xabadjoojinta, kulan degdeg ah oo ay yeelanayeen ururka jaamacadda Carabta kaas oo ka dhacaya magaalada Qaahira.
Masar ayaa isku deyeysa inay dib boorka uga jafto doorkeedii hore ee ahaa dhexdhexaadinta Isra'iil iyo Xamaas oo ay horey ugu eedeysay inay la jirto dhinac.
Image caption Ra'iisalwasaaraha Isra'iil Benyamin Netanyahu
Waxaa lagu tilmaamaayaa inay qorshe muhiim ah tahay xabad joojinta oo daba socotay kaddib wadahadallo qaatay 48 saac oo ka dhacay magaalada Qaahira.
Labada dhinac (Isra'iil iyo Xamaas) ayaa la filaayaa inay la kulmaan xubno ka socdo dalka Masar, si looga hadlo heshiis xilli dheer ah oo la isugu soo dhaweynaayo kala fogaanta hadda u dhexeysa.
Duqeymaha Isra'iil ay ku hayso Marinka Qaza waxaa ku dhintay dad kun dhaw 200 ruux, oo u badan rayid.
Weerarka Qaza oo socda toddobaad